ISKA JIR: ”Waxaan maqlayay iyadoo lagu gorgortamayo sida loo gadi doono XUBNAHAYGA!” – Arrin ka nixinaysa Soomaalida qurbaha oo dhacday!! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ISKA JIR: ”Waxaan maqlayay iyadoo lagu gorgortamayo sida loo gadi doono XUBNAHAYGA!”...
ISKA JIR: ”Waxaan maqlayay iyadoo lagu gorgortamayo sida loo gadi doono XUBNAHAYGA!” – Arrin ka nixinaysa Soomaalida qurbaha oo dhacday!!
(Gothenburg) 28 Maarso 2019 – Bukaan oo cuuryaamiyay cudurka shallalka (stroke) oo sariir saaran isagoo aan hadli karin, ayaa dhegihiisa ku maqlay dhakhaatiirta oo kaddib markii ay qoyskiisa ku quusiyeen inaan waxba laga qaban karin, misna iyagii si deggan uga sheekaysanaya sidii ay u iibin lahaayeen xubnihiisa muhimka ah.
Jimi Fritze, 43 jir, ayaa maqlay eray kasta oo ay yiraahdaan, balse waxba kama qaban karin waayo ma dhaqaaqi karin, mana hadli karaynin.
“Kaliya indhahayga iyo dhegehayga ayaa shaqaynayay. Iyagu (dhakhaatiirta) waxay saaxiibtay iyo qoyskayga u sheegeen inaysan rajo jirin“. ayuu yiri.
Qoyskiisa iyo saaxiibbadii oo muraara dillaacsan ayaa misna ugu yimid inay macasalaameeyaan kaddib markii ay dhakhaatiirtu u sheegeen in boqolleeyda uu ku badbaadi karo ay tahay “0%” iyagoo qiil ka dhigtay natiijada Scan ay saareen.
Jeer ay eheladii iyo asxaabtu sariirtiisa ku hareereeysan yihiin, waxay qoyskiisa waydiiyeen suurtagalnimada in la diiqo xubnihiisa, balse waxay moogaayeen inuu maqlayay Mr Fritze.
Bukaanka Jimi Fritze ayaa ugu dambayn bugtadii ka boodey kaddib markii ay qoyskiisu go’aan kale qaateen oo geeyeen isbitaal kale, oo baaritaan kaddib gartay inuu miir ahaan naaxsan yahay oo uu soo kaban karo.
Waxaa lagu duray hoormoonka Cortisone si hoos loogu dhigo bararka maskaxda, waxayna ku qaadatay 3 todobaad inuu ka sheekeeyo wixii dhacay iyo calwasaadkii uu caalwaagu wehliyay ee uu maray markii uu dhegeystey in isagoo nool xubnihiisa lagu gorgortamayay.
Wuxuu deeto dacwad rasmi ah ka gudbiyay dhakhaatiirtii dad qalka ahayd, sida lagu qoray The Local.
Warqaadka Wall Street Journal ayaa isna daabacay daraasad cabsi badan oo muujinaysa kobaca suuqa iibsiga xubnaha dadka, isagoo ku dooday inay dhakhaatiirtu iibsadaan xubnaha bukaanka oo ay la baxaan qofka oo weli nool.
Waxaa jira xeer Maraykanka ka degsan oo dhakhaatiirta u ogolaanaya inay qofka ku duraan “dawo cuuryaamiso ah” haddii uu qofku dhaqdhaqaaqa joojin waayo, si “qaab amaan ah” loogala boxo xubnihiisa asaasiga ah.
Mr Fritz, ayuu maskaxda dhiig uga furmay xilli uu saaxiibtii iyo saaxiibadii la joogey jasiiradaha ku hareereeysan magaalada Gothenburg, lamana sheegin isbitaalka uu falkani ka dhacay.
Previous articleGolaha Amaanka oo warbixin isku KHALDAYSA wasiirro ka tirsanaa DF Somalia soo saartay! (Arag nuqulka asliga ah)
Next article”Haddii ay aad Israel dhul la jeceshihiin, siiya labada gobol ee North iyo South Carolina” – Danjiraha Suuriya ee QM